Ngo-March 27 1968, izwe ishaqekile kokufa Cosmonaut lokuqala Yuri Gagarin. ukumamatheka kwakhe ebukekayo akazange abashiye ubani nandaba, kungakhathaliseki ukubukwa zezombusazwe, sengqondo maqondana eSoviet Union futhi ndawonye. WayeyiZwi Earthman wokuqala abaminzayo orbit, yena wayethandwa zonke.
Kuze kube namuhla, imibono ehlukene mayelana nendlela Gagarin wafa ubani okufanele asolwe. kokuhlolisisa Ukuphahlazeka ngenxa yokuthi bhasi kokuvalelwa izigubhu air-Friend futhi wathumela isitoreji unomphela. Isiphetho olusemthethweni siqanjwe inqwaba amavolumu, futhi eqinisweni alichazi lutho. Mig-15UTI ukuthi kulungile, akukho izimo ezikhethekile asemkhathini ezonini indiza uyalandelwa, angaphandle izindiza banyamalele. Izwe, amahemuhemu ukuthi abashayeli bezindiza badakwe. Mhlawumbe kule nguqulo ukusabalala ngenhloso yokufihla imbangela aziwayo kancane kweqiniso.
Ikhomishini wazama ukwenza umqondo ukuthi wafa kanjani, Yuri Gagarin, uphenyo ngezimo izenzakalo eziningi ezandulela bashayisana indiza emhlabathini. Imibandela sezulu zazingezinhle, cishe ngaso sonke isikhathi wachitha emoyeni, indiza indizela emafwini, futhi ezindizayo kwakwenziwa "abayizimpumputhe", okusho ukufundwa. Kusukela ngomhla ka-1968 MIG-15UTI (ukuqeqeshwa okufushane kabili MIG-15) akazange kubhekwe ongasasebenzi, yasetshenziswa ukuze alulame pilot flying amakhono emva iholidi noma ukugula, okungenani kwaze kwaba maphakathi nawo-70s. Enye into ukuthi lokhu izindiza bekulokhu ezinye izici zokulawula: ingilazi eside lantern zilulaza ukusebenza sokunciphisa umoya lapho zindiza futhi yehlise ukuzinza lateral. Kodwa kunzima ukucabanga ukuthi somshayeli ongumakad 'ebona Seregin ayikaziwa.
Insimbi base ngaleso sikhathi lalinabashumayeli alamu okuthiwa, ie izinkomba lokukhanda. Ngenxa yokwanda okusheshayo noma wehlise altimeter selishonile, futhi ongangena pilot wayephambanisa, enza yasemoyeni aqondisa, ngokukhethekile, ovundlile noma uzungeze emgqonyeni, kodwa kwakungeyona knock umqondo instructor.
Uphenyo luveze ukuthi imizuzu embalwa ngaphambi Gagarin bafela wezasemoyeni agodliwe indiza ukuqeqeshwa, kwafika nomunye lempi fighter aircraft - lwanamuhla Su-15. Ngokungafani Subsonic MIG-15, kungaba ukufinyelela ijubane phezu 2.200 km / h, inezinga eliphezulu Umqansa kanye maneuverability. Nge awokuthi kungenziwa bazitshela ukuthi khona awo ayengakwazi abanamanxeba abulalayo umphumela indiza. Ngezinye ndima eduze eduze iphansana-speed MIG "Dry" kungase kudale zeziyaluyalu nomoya wagumbuqela "Spark". Nokho, le nguqulo alinikezi incazelo oluphelele, ngoba phakathi neMpi YaseKorea, "nanhlanu" ukuwa hhayi ezisicasulayo ezinjalo, kodwa namanje ngaphansi umlilo esindayo.
Endaweni lapho okuhlatshelwa khona Gagarin wabulawa, eliqoshiwe yesikhumbuzo ngamaphrofayela iphahlazeka pilot. Namuhla kuyaziwa ukuthi utshwala bephuza ngosuku olwandulela ekubhujisweni. Ngakho, ngemva kweminyaka eminingi nabulungisa alungisa izwi lomlomo, okuyinto osolwa umshayeli uVladimir Seregin kule ngozi, nguye esasiphethe ukuphila oqeqeshwayo yakhe edumile indiza ukuqeqeshwa.
Mhlawumbe incazelo, njengoba ezimweni ebanga usizi kunazo zonke, akufanele ezitholakala yisiphi isizathu esisodwa, futhi inhlanganisela yawo. Flight imfundo i- naphambi Gagarin wafa, cishe kuyo yonke indawo. IKhomishane Yophenyo uye wafakazela iqiniso ngeziphambeko eziyishumi kusukela ezamukelwayo ukuqinisekisa ukuphepha eSoviet Air Force. Liguqubele benza umnikelo, eziya ziba zimbi orientation we-pilot kwaze kwaba ikhulu lesibili zokugcina uzama lungise indiza. Isifundo ayenganikezwanga isethulo fair we ngekwendzawo isikhundla isihlobo ukuba komhlaba. Uma lezi zici, ngalinye elikwazi ngokwalo akusho ingozi ofayo ukuze ungeze kungalindelekile sekuvele imisinga eddy, kuba sobala ukuthi abashayeli azange abe okwanele kwezinye amakhulu amamitha ukuphakama. Izizathu ukufihla iqiniso mayelana nokuthi Gagarin wafa, cishe, kade kuphela zomnyango.